I umhlobiso main nokuziqhenya elingenakuphikwa zonke girl - a izinwele amahle, enempilo futhi uzilungise. Lapho siphishekela emakhosazaneni ekahle bawaphoqa zonke izinhlobo izinqubo nemiphumela zamakhemikhali, kuhlanganise nombala. Kodwa kwenzeka kaningi impela ukuthi umbala enhle edwetshwe ebhokisini, eqinisweni kuvela ohluke ngokuphelele. Noma ukupenda ngokwayo ngobudlova kakhulu liziphatha phakathi nangemva izinwele kuthatha isikhathi eside ukuba ngilulame, ngiphilise. Ngeshwa, kuyenzeka. Ngakho-ke, i-choice izinwele wemvelo kufanele wasondela ngokucophelela futhi ngendlela efanele.
Wella Professionals inikeza indlela entsha ngokuphelele izinwele imidwebo. Ukudweba "Wella Illumina" - a imibala yemvelo omangalisayo, kukhanya okungenakuqhathaniswa, ukuqina kakhulu futhi lula ukusetshenziswa! Kodwa izinto zokuqala kuqala.
Maintenance and Umdwebo ngesikhathi esifanayo
Izinwele udayi "Wella Illumina" ngeke kukumangaze nge izimfanelo zayo. Ngeke nje kuphela ukushintsha umbala, kodwa futhi ukunikeza ukunakekela of umucu ngamunye. Izinwele cuticle akuyona olimalayo, kodwa kunalokho, wathamba futhi esehlelembe, okuvumela izinhlayiya udayi ukungena ekujuleni kwenhliziyo, futhi udale umphumela kukhanya. Ngakho-ke, ukhilimu "Illumina" abanikazi angasebenzisa izinwele ngisho ziyaqothuka futhi mncane imvelo.
Ngaphezu kwalokho, ukhilimu ubhekana grey. Umenzi unika Umdwebo isiqinisekiso ngamaphesenti ayikhulu, kodwa awukwazi kodwa jabulani. Enye plus - kuba ifomula ukumelana evumela upende isikhathi eside futhi qinani lo mbala main. Njengoba Kabusha izinwele kusukela zone impande umehluko obunganakekile.
Diamonds in izinwele zakho
Inkampani German "Vella" lisetshenziswe kulesi emisha upende - ubuchwepheshe "Microlight". Inikeza izinwele akhanye kusuka ngaphakathi, kungakhathaliseki ukukhanyisa. Imfihlo ubuchwepheshe lobunikazi - ekuvikeleni futhi ahlelembe cuticle. Uma uyikha phezulu le izinhlayiya aqukethe sesigcilikisha zethusi okuyinto njalo ukuxubana ezivamile Umbala izingoma. Ngenxa yalokhu, nezinwele anolaka, zibe maholoholo futhi kanzima, ukukhanya lapho ehlaselwa bachitheka, umbala ubukeka buthuntu. Penda Izingxenye "Vella Illumina" izinwele ukunakekelwa imvilophi izinhlayiya ithusi, ekuvimbeleni abasabela ngayo nge ingxube udayi, ukwenza surface bushelelezi lokuzenzela. Ngenxa yalokho - play omangalisayo imibala, curls enwebekayo kukhanye Amazing!
izinwele wemvelo okunethezeka
Isikhathi esining impela lapho sithola Umdwebo akulona nombala ofanayo, futhi ngezinye izikhathi ngisho umbala singathanda! Ebonakaliswa yellowing Blondet, blue Motifs brunettes, "rustiness" ngesikhathi abesifazane brown asebegugile - kubukeka ezishibhile futhi inobudlabha. Ukuze lezi exakayo wasesukuma izinwele zakho kuphela bakhangwa bencoma nhla, sincoma ukuthi uzame imikhiqizo 'Illumina Vella. " Kulesi paint palette uhlu anemibala zemvelo kuphela. zombala Over 30 letentelwe kuphumelelisa umbala oyifunayo. Kukhona imibala eyisisekelo futhi ezingeziwe, ungabahlukanisa izinombolo: Igumbi eziyisisekelo siqukethe inombolo eyodwa, nokuningi - laba ababili. Bona zingahlanganiswa futhi kuxutshwe ukuze lelisu iyiphi fantasy umbala. Abanikazi inani elikhulu grey (ngaphezu kuka-70%) Kunconywa ukusebenzisa imibala eyisisekelo. Uma kufanele uhlanganise base wabhanselwa, isilinganiso edingekayo ukuze best ukudaya umphumela - 1: 1.
Ngidweba, "Vella Illumina" Iphalethi ithatha ezibanzi. Phakathi kweshumi shades ezingaphezu kwezintathu uthole omunye ofuna ukukubona izinwele ngaphandle kwezinkinga.
Sicela uqaphele ukuthi akudingekile ukuba uhlanganise yezingxenye Umbala uchungechunge ezahlukene: konke amafomula eliyingqayizivele futhi izakhiwo. Kulokhu, ubuchwepheshe "Microlight" akusebenzi.
Welloxon oxidant Perfect etholakala gradations ezintathu - 6%, 9% no-12%. Ubuningi iphesenti oxidant kuyakhethwa kuye isibalo amathoni for ofuna ekhanyisa izinwele zakho phakathi umbala. Sizoba ukufunda izisekelo umbala, ukugwema nemiphumela engalindelekile.
Ukuze umbala ithoni ku ithoni, ukushintsha umbala owodwa ithoni grey noma sifihle ukhethe ngokuphepha Welloxon Perfect 6%. Kukhanya izinwele kudinga ukusetshenziswa imibala emibili 9% lokuhlushwa oxidant futhi ekhanyisa ngu amathoni engaphezu kwemibili sebenzisa Welloxon Perfect lokuhlushwa 12%.
Oxidant Xuba ukhilimu-upende Kudingeka isilinganiso 1: 1, okusho ishubhu elilodwa kapende uzodinga 60 ml oxidant.
upende Kwethulwa likhona umugqa kwamathuluzi professional, ngakho okuthola kulula ukuba ncamashi ezitolo ezikhethekile. Kubalulekile nokukhumbula ukuthi uzothola upende ehlukile futhi oxidant nalokho.
Yikuphi ikhithi ukukhetha mangaki imibala ufuna ukushintsha umbala nalokho umbala endaweni izinwele kuncike ngokuqondile.
Staining engenziwa ngezindlela ezimbili - usebenzisa ukushisa futhi ngaphandle kwalo. Ekhaya, njengoba umthetho, sebenzisa samuntu yesibili, ngaphandle ukushisa.
Ngakho, i-umbala ithoni e ithoni noma iphimbo kwelinye ithoni kufanele usetshenziswe ukupenda kusukela empandeni kuya enika, ukushiya isikhathi kusuka imizuzu engu-30 kuya kwengu-40 e-samuntu ngaphandle isicelo ukushisa, futhi kusukela imizuzu engu-15 kuya ku-20 uma usebenzisa efudumele.
Lapho ukudaya nge siphungule izinwele amathoni ezimbili kanye upende isetshenziswa phezu obuphelele yonke we Strand is Kuhlehliswe batholakala ezimpandeni mayelana 2 cm. Lugcinwa imizuzu 20 ngaphandle ukushisa futhi ngineminyaka engu-10 usebenzisa umphumela ezishisayo. Okulandelayo lisetshenzisiwe izimpande, futhi banikezwe yisikhathi sokuthatha isinyathelo imizuzu 30-40 ngaphandle kosizo ukushisa kanye 15-25 nge nomphumela ezishisayo, ngokulandelana.
"Wella Illumina": Izibuyekezo
Kuningi ladies kwadingeka isikhathi zama ngidwebe ngopende kanye nokwenza ukuhlola umphumela. Girl Phakathi izinzuzo eziningi ngokuvamile zihlukaniswa:
Noble izinwele umbala unikeza upende "Wella Illumina." Palette ikuvumela ukuthi ukhethe umthunzi kwesokudla.
ezinemibala nombala izinwele. Ukudweba ngempumelelo ubhekana ngokuhlolwa odlule futhi Hairdressing Tonirujushchaja avelele ngeshwa kuthiwa zakhukhula nezixhobo umbala noma izimpande cool regrown.
isicelo kalula nge-non-ochwepheshe, akusho ukusakaza, lapho yokudweba akuyona iphunga okunoshukela. Njengoba abesifazane abaningi bachitha isikhathi izinwele inqubo ukudaya ekhaya, kubalulekile lula kokusebenzisa upende. Ukuvumelana thick ukhilimu upende ukuthi kunciphisa ukungakhululeki ngesikhathi efaka isicelo. Pleasant nephunga avulekile akusho obungamcasula receptor njengoba upende ezivamile.
Izinwele baba ethambile. Girls ukugubha upende ikhono lungisani izinwele, abenze silky futhi nokunwebeka. Ezinye uqaphele umphumela ukunakekelwa spa emva imidwebo.
Effect avelele ezinweleni zakhe - noma ngabe yokudweba kwelinye ithoni kunikeza umbono Umbala. Zingu "ukudlala" ezimweni ezahlukene ukukhanyisa. Ukudweba "Wella Illumina", okuyinto Iphalethi ocebile ngakho ikuvumela ukudala i isibalo esingapheliyo inhlanganisela imibala, kodwa ngezinye izikhathi kudingeka nje umuntu oqonda kahle obujwayelekile.
Ukudla okunomsoco ekhaya: iresiphi yokupheka. Indlela yokwenza inyama eluhlaza ekhaya?
Georgia, Mestia: ezikhangayo, isithombe